के तपाईं लाई थाहा छ ? भगवान शिवले किन सेवन गर्छन् भाङ, धतुरो र गाँजा !!! – live 60media
के तपाईं लाई थाहा छ ? भगवान शिवले किन सेवन गर्छन् भाङ, धतुरो र गाँजा !!!
भगवान शिवले नशायुक्त पदार्थको सेवन पछाडि एक कथा लुकेको छ। कथा यस प्रकार छ:देवता र दैत्य मिलेर अमृतका लागि समुन्द्र मन्थन गरिरहेका थिए । उक्त समुन्द्र मन्थनमा अमृतका साथसाथ विष पनि निस्किरहेको थियो ।
शिव भगवानले विष पिउना साथ उनको गलालाई शिव पत्नी पार्वतीले समातिन् । विष भगवान शिवको शरीर भित्र पस्न पाएन । विष भगवान शिवको गलामा रोकियो जसका कारण शिव भगवानलाई नीलकण्ठ भन्ने गरिन्छ ।विष पिउनाले भगवान शिवको स्थिति बिग्रन लाग्यो र भगवान शिव अचेत हुन लागे । तब त्यसको प्रभाव शान्त गर्नका लागि भगवान शिवलाई भांग, धतुरो, गाँजा, दूध तथा जल अर्पण गरियो ।
← मलेशिया कारले फेरि विदेशी श्रमिकको लेभि काट्ने घोषणा, कहिले बाट लागू हुदैछ…हेर्नुहोस् मलेशिया सरकारले फेरि विदेशी श्रमिकको लेभि काट्ने घोषणा, कहिले बाट लागू हुदैछ…हेर्नुहोस्
विवाहकै दिन कल्पना र रमेशबीचको सम्बन्धको कुरालाई लिएर रोइन् नन्दा, गरिन् यस्तो बाचा (हेर्नुस् भिडियो) →